सार्वभौमसत्तामा प्रहार !!! – Samaweshi Nepal.com
प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०७७, सोमबार १८:५१
महामारीको संकटमा यतिबेला नेपाल मात्र नभई विश्वको २१२ देश जुदिरहेका छन् । पछिलो समय छिमेकी मुलुक भारतमा झन् तिब्र गतिमा यो महामारी फैलिरहेको छ । यस महामारीका बाबजुद भारतले भने नेपालीभूमि हुदै चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गर्न तल्लिन रहेको देखियो । भारतले करिब ६ महिना अघि मात्र नया राजनीतिक नक्शामा नेपालको कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएको नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो ।
आज ६ महिना पच्चात नेपालि भूभाग ब्यास र गुन्जी हुदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग उदघाटन गरेको छ । विवादित भूमिमा यसरी मनोमानी ढङ्गले निर्माण गरेको सडक छिमेकी भारतको हेपा प्रवृति हो । भारतले बनाएको सडक एकाएकक २४ घन्टामा बनाएको हैन । सन् २००८ बाट नै यो सडकको निर्माण कार्य अघि बढेको भन्ने प्रमाण हामी माझ रहेको छ त्यसो हो भने नेपाल सरकार र राजीनितिक दलहरु यतिबेला सम्म किन मौन? के एउटा विज्ञप्तिले मात्र नेपालीको स्वाभिमानको रक्षा हुन्छ त?
बडा गज्जबको कुरा त् हाम्रा अहिले सरकार हाकेर बसेका नेतृत्वगणले समेत नेपाली भूभाग मिचिएर बनाएको सडकको जानकारी हालै मात्र थाहापाएको अभिव्यक्ति दिईरहेकाछन् । यो भन्दा लज्जाको विषय अरु के हुन सक्छ ? नेपाल भारतको सीमा विवादलाइ नियाल्ने हो भने यसको बिन्दु महाकालीको मुहान बाट सिर्जित भएको हो । यो नदीलाई माथितिर काली भनिन्छ, मध्यभागमा महाकाली, र तल तराईमा आइसकेपछि गोग्रा पनि भन्ने गरिन्छ ।
यद्दपि महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो र त्यो नेपालि भूभाग नै हो भन्ने प्रशस्त प्रमाण छ । सन् १८९६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान हो र महाकाली नदि नै नेपाल -भारत सीमाना हो भन्ने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । त्यसैले लिपुलेक मात्र हैन लिम्पियाधुरा पनि नेपालको भूभाग हो । तर आज दुर्भाग्य भारतीयले हाम्रो ३१० वर्गकिलोमीटर भुमि आफ्नो पक्षमा राखेका छन् ।
यति ठुलो भूभाग ५८ वर्ष देखि भारतको कब्जामा रहेको छ । भारत सरकारको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनले निर्माण गरेको सडक व्यापारिक र पर्यटकीय दृष्टिले निर्माण गरेको हो । मुलत यसका दुई उद्द्येस्य छन् । पहिलो, चीन संगको ब्यापार र दोस्रो मानसरोवर सम्मको धार्मिक पर्यटकियलाइ सहजता प्रदान गर्न । हाल मानसरोवर जान भारतको सिक्किम र चीनको सिमाना नाथुला पासबाट मानसरोवर जाने रुट भएता पनि तीर्थयात्री नेपालको बाटो नेपालगंज, हुम्ला हुदै हिल्सा मार्फत जाने गर्दछन ।
लिपुलेक बाट मानसरोवरको दुरी ९७ किलोमीटर छ भने भारतको दिल्ली बाट लिपुलेकको पास ७५० किलोमीटर छ । यसले गर्दा अब नेपालको हुम्ला वा भारतको सिक्किम बाट भन्दा अहिलेको बाटो बाट आर्थिक र पर्यटकीय दृष्टिले यो मार्ग सहज हुने देखिन्छ । उसो त लिपुलेकबाट बाटो खोल्न सन् १९५३ मा चीन र भारतवीच द्विदेशीय सम्झौता भएको हो । तर, लिपुलेक नेपाल-भारत र चीनको गरी त्रिदेशीय सीमाना हो र यो सम्झौतामा नेपाललाई सहभागी नगराउनुको पर्दा पछाडिको कारण के होला ? भनिन्छ भाइ फुटे गवार लुटे, नेपाली राजीनितिक इतिहास देखि आजको दिन सम्म आइपुग्दा स्थिर सरकारको अनुभूति गर्न सकेन । बल्ल तल्ल अहिले दुई तिहाइको स्थिर सरकार पाएका छौ तर पनि नेताहरु आफ्नो पद मोहका लागि म्युजिकल चियर खेल्न रमिरहेका छन् ।
जब सम्म आन्तरिक प्रजातन्त्र सबल रहन्न छिमेकीको थिचो मिचो सहिरहनुपर्ने हुन्छ । आज हामी रास्ट्रीय बल र एकता सहित एकै ठाउमा उभिनु जरुरि छ । सीमा विवादमा पटक पटक गरी थुप्रै वार्ता भए तर त्यसको समाधान गर्न नसक्नुको कारण बोल्ड , निडर र दुरदर्शी नेतृत्वकै अभावले हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । जसरी सन् १९६० मा सगरमाथा माथिको विवाद उत्पन्न भएको थियो, त्यसबेला वि पी कोइरालाले चीनका नेता माओका अगाडी नक्शा राखेर जुन रुपले कुटनीतिक र निडर तवरले वार्ता गरी समस्या समाधान गरेका थिए । आज देशले साचिक्कै अर्का विपी खोजिरहेका छन् ।
अब पनि ढिला नगरी औपचारिक र सौहार्दपूर्ण तवरले सीमा विवाद सुल्झ्याउन आवश्यक छ । पटक पटक अखण्ड सार्वभौमसत्ता माथिको प्रहार अब नेपालीले सहन्न र यस विवादको दिर्घकालिन समाधानको लागि यो मुद्धालाई अविलम्ब अन्तरास्ट्रीयकारण गर्न आवस्यक छ । मुकेश सेन्चुरी
२९ बैशाख २०७७, सोमबार १८:५१ मा प्रकाशित